Kooxaha u soo baxaya Europa League & Kuwa u laabanaya horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska oo maanta la go’aaminayo.. (Yuu tartanku u dhexeeyaa?) – Gool FM
(Manchester) 22 Maajo 2022. Horyaalka Premier League ayaa la isla aaday maalinta ugu dambeysa si loo go’aamiyo arrimo dhowr ah, waxaana go’aannada la sugayo maanta ka mid ah in la ogaan doono kooxaha u soo baxaya Europa League iyo weliba kooxaha u laabanaya horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska.
Maqribnimada maanta oo la ciyaarayo kulammada lagu soo xirayo horyaalka Premier League, waxaa la ogaan doonaa Manchester United iyo West Ham United kooxda ku dhammaysan doonta kaalinta lixaad ee horyaalka, isla markaana u soo bixi doonta Europa League xilli ciyaareedka soo aaddan.
Man United haatan waxa ay leedahay 58 dhibcood, farqiga goolasheeduna waa kaliya waa 1 gool, halka West Ham ay leedahay 56 dhibcood, farqiga goolasheeduna uu yahay 11 gool, waxaana u dhexeeya labada kooxood farqi 10 gool ah oo ay ku sarreyso West Ham.
Arsenal iyo Tottenham kooxdii soo weysa u soo bixitaankeeda Champions League xilli ciyaareedka soo socda, waxa ay hubaal ka soo muuqan doontaa Europa League fasalka dambe, balse waxa ay su’aashu tahay yaa ku wehlin doona ma Man United mise West Ham United.?
Haddii ay Man United barbaro la gashay Crystal Palace, isla markaana ay West Ham soo garaacdo Brighton and Have Albion, waxa labada kooxood noqon doonaan isku dhibco, balse farqiga goolasha waxaa Europa League ku aadi doonta West Ham, maadaama ay ka goolal badan yihiin Man United, balse haddii ay Red Devils adkaato iyada ayaa si toos ah u aadi doonta tartanka Europa League.
Dhinaca kale waxaa la sugayaa in la ogaado kooxaha u laabanaya horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska, sida caadiga ah saddex naadi ayaa ka dhacaya horyaalka Premier League iyadoo horay ay labo kooxood u xaqiijiyeen waana Norwich iyo Watford.
Labadaas kooxood waxaa la sugayaa tan ku biiri doonta Burnely iyo Leeds United, waxaana haatan wada leeyihiin min 35 dhibcood.
Labada kooxood ee Burnley iyo Leeds haddii ay barbaro galaan ama ay wada badiyaan kulanka ugu dambeeya horyaalka, waxaa heerka labaad u laaban doonta Leeds United oo haatan lagu leeyahay 38 gool oo deyn ah.
Waxaana dhacdooyinkan la go’aamin doonaa maanta oo la soo xirayo horyaalka Premier League 2021/22.
Yaa ku dhammaysan doona kaalinta lixaad ee horyaalka Premier League oo u soo bixi doona Europa League, Man United mise West Ham, Yaase u laaban doona heerka labaad Burnley mise Leeds aragtidaada qeybta hoose inoogu reeb.?